बजेट कार्यान्वयन टिठलाग्दो भोः सांसद सापकोटा | eAdarsha.com
बजेट कार्यान्वयन टिठलाग्दो भोः सांसद सापकोटा
पोखरा । सत्तारुढ सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा बजेट खर्चको दरमा रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशको आगामी बर्षको बजेटमाथी छलफल गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन नहुँदा प्रणालीमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको तर्क गरे।
‘कोभिड त चैतदेखि आयो । १० महिनासम्म पुँजीगत खर्च हेर्दा टिठलाग्दो छ । कुनै एक मन्त्रालय विशेषको प्रश्न होईन । सिंगो संसदमा रहनेहरुको बीचमा प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘ब्यूरोक्र्याट्स र मन्त्रीहरु बीच कतै भेट नभएको त होईन ? नीति कार्यक्रम ब्यवस्थित ल्याएको छौं, बजेट ब्यवस्थित ल्याएका छौं । आवश्यक ऐन कानुन पनि बनाएका छौं । तर बजेट किन कार्यान्वयन हुँदैन ? संघको ब्यथा पनि त्यही छ, प्रदेशको पनि त्यही ब्यथा छ, स्थानीय तहको पनि त्यही ब्यथा छ। सुधार कहिले हुन्छ ?’ उनले बजेट कार्यान्वयनमा भएको समस्यामाथी छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
‘यदी मन्त्रीहरुमाथी समस्या छ भने खोजवीन गर्नु जरुरी छ। कर्मचारीमाथी समस्या छ भने खोजवीन गर्नु जरुरी छ । विगतमा ऐन बनाउने चटारोमा फुर्सद पाएनौं । अहिले कोभिड आयो भनौंला । तर छलफल गर्न सकेनौं भने सरकार माथी, शासन प्रणाली माथी कडा चुनौति आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘४ महिनाभित्र योजना सम्झौता गर्ने र अख्तियारी दिने कुरा आएको छ। यो मन्त्रीले भन्दैमा यो परिवर्तन हुँदैन । शासन प्रणालीमा समस्या छ । हाम्रो एटिच्युटहरुमा छलफल गर्नु जरुरी छ ।’ उनले आगामी बर्षको बजेटमा धेरै बिषयहरु सुधार भएको र जनमुखी बनेको बताए ।